MasterCard's CFO: Cryptocurrency iibsadaan waxaa kor kharashka macaamiisha - Blockchain News
MasterCard ee Around The: Cryptocurrency iibsadaan waxaa kor kharashka macaamiisha
Mastercard ayaa arkay in la kordhiyo isticmaalka qayb ahaan sabab u ah dadka isticmaala iibsiga cryptocurrency.
Muga gudba xuduudaha Shabakadda bixinta ee – qiyaas kharashka macaamiisha dibadda – ayaa kor u kacay 22 boqolkiiba tan iyo sanadkan, shiday qayb by macaamiisha isticmaalaya kaarar ay ku soo iibsadaan lacagaha digital, ayaa sheegay in Sarkaalka Financial Chief Martina Hund-Mejean on Thursday. kharashka sare on safarka ee Europe ayaa sidoo kale ka qayb qaatay, ayay tidhi.
"Just in ay si cad, ma waxaan ku beddelato ama ka dego xawaalad cryptocurrency badan our network,"Hund-Mejean sheegay call a la falanqeeyayaasha. "Qorshe Our ma kibir noocan ah dhaqdhaqaaqa sii wadi doonaa sidii aan jirin line hortiisa leeyihiin sida kaarka aragtid cryptocurrencies mustaqbalka."
Post Previous:Produce ee chips ASIC ka Samsung
Post Next:UPS gudbiyo patent inay aqbalaan Seeraar for lookarrada